15– मुटुमा के-के रोग हुन सक्छन् ? सवैभन्दा खतरनाक के हो ?
आज : २०७५ मङ्सिर २६ बुधबार / 12th December, 2018 [email protected]
आममानिसमा मुटुरोग भन्नासाथ हृदयघात र हार्ट फेल मात्र हो भन्ने भ्रम छ । तर, मुटका अन्य थुप्रै रोग हुन्छन् । मुटु र रक्तनली सम्बन्धित भएकाले मुटुका सयभन्दा बढी रोग हुने गरेको डा प्रकाशराज रेग्मी बताउँछन् । तीमध्ये डाक्टरहरुले मुटुका रोगलाई जन्मजात मुटुरोग, बाथ मुटुरोग र 18 सम्बन्धी मुटुरोग भनेर ३ भागमा बाँडिएको उनको भनाइ छ ।
जन्मजात मुटुरोगः कुनै केटाकेटीलाई जन्मजात मुटुरोग लागेको हुन सक्छ । डा रेग्मीका अनुसार यो रोग थोरैलाई मात्र लाग्छ । उनका अनुसार गर्भधारण गरेको ३ महिनाभित्र आमालाई रुबेला नामक दादुराजस्तै प्रकृति भएको रोग लाग्यो भने यसले शिशुको निर्माण भइरहेको मुटुमा विकृति गराउँछ । फलस्वरूप जन्मजात बालकमा मुटुको समस्या आउँछ । उनी भन्छ, ‘गर्भधारण गरेको ३ महिनाको अवधिमा महिलाले गर्भका लागि असुरक्षित मानिएका औषधि सेवन गरेमा, अत्यधिक धूमपान र मद्यपान गरेमा, शरीरमा एक्सरेको विकीरण परेमा मुटुको संरचनामा गडबडी भई बच्चामा विकृत मुटुको निर्माण हुनजान्छ ।’
डाक्टरहरुका अनुसार भोजनमा भिटामिन र अन्य आवश्यक पोषण तत्वको कमी भएमा पनि जन्मजात मुटुरोग लाग्ने सम्भावना रहन्छ । नवजात शिशुको जिब्रो, ओठ र औंलाका टुप्पाहरु नीलो हुने, अाै‌ंलाका टुप्पाहरु बाक्ला र चाक्ला हुने, मुटु हल्लिने, दम बढ्ने, बारम्बार रुघाखोकीले सताइराख्ने, शिशुको उमेरअनुसार शारीरिक विकास नहुने र निधारमा पसिना आउने जन्मजात मुटुरोगका लक्षण हुन् ।
बाथमुटुरोगः यो बच्चा अवस्थामा घाँटीमा समस्या भइरहेका केटाकेटीलाई देखिने रोग हो । सामान्यतः ३ देखि १५ वर्र्षका बालबालिकामा बारम्बार घाँटी दुख्ने, टन्सिल बढ्ने हुन सक्छ । यसरी घाँटी दुख्ने गरेका केटाकेटीलाई एकखाले ज्वोरो आउन सक्छ, जुन बेला एकपछि अर्को गरी हातखुट्टाका ठूला जोर्नीहरु दुख्ने र सुन्निने हुन्छन् । यो ज्वरोलाई बाथज्वरो भनिन्छ । यसै ज्वरोको कारण पछि गएर मुटुको भल्भ खराब हुने रोग लाग्छ । यसलाई बाथमुटुको रोग भनिन्छ ।
18सँग सम्बन्धित मुटुरोगः 18सँग सम्बन्धित मुटुरोगमा हृदयाघात, उच्च रक्तचाप आदि पर्छन् । मुटुरोगमध्ये हृदयाघातलाई मानव मृत्युको प्रमुख कारण मानिँदै आएका छ । डाक्टरहरुका अनुसार मुटु मांसपेशीको डल्लो हो, यसले पम्पको काम गर्छ र शरीरभर रक्तसञ्चालन गराउँछ । मुटुलाई काम गर्ने ऊर्जा मुटुका मांसपेशीको बाहिरी भागमा रहेका ३ वटा कोरोनरी रक्तनलीहरुमा प्रवाहित रगतमार्फत ग्लुकोज र अक्सिजनबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण मुटुलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जा प्राप्त हुन मुटुका कोरोनरी रक्तनलीहरु स्वस्थ हुनु जरुरी छ ।
तर, यी रक्तनली विभिन्न कारणबाट कोलेस्टेरोल (बोसो) जमेर साँगुरो हुने गर्छ । जसका कारण मुटुमा रगतको प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ र मुटुका मांसपेशीहरुमा पर्याप्त मात्रामा ग्लुकोज र अक्सिजन पुग्दैन । विस्तारै कोरोनरी रक्तनली पूरै बन्द हुने सम्भावना बढ्छ । रक्तनली पूरै बन्द भएको खण्डमा रगतको प्रवाह पनि पूरै बन्द हुन्छ र मुटुमा ऊर्जाको आपूर्ति ठप्प हुन्छ । मुटुमा ग्लुकोज र अक्सिजनको आपूर्ति नभएपछि मुटुको मांसपेशी क्षत्रिग्रस्त हुन थाल्छ र यो क्रम लम्बिँदै गएमा मांसपेशी मर्छ र यसले काम गर्न छाड्छ । यो अवस्थालाई हृदयघात भएको भनिन्छ । हृदयघात हुँदा छातीको बीच भागमा असह्य पीडा हुन्छ । हृदयाघात भएका व्यक्तिले समयमै उपचार नपाए तत्काल मृत्यु हुन सक्छ ।
त्यस्तै, मुटुरोगमध्ये उच्च रक्तचाप पनि एक खतरनाक रोग हो । हाम्रो मुटु खुम्चिने र फुल्ने गर्दा रक्तनलीहरुमा उत्पन्न हुने चापलाई रक्तचाप अर्थात् ‘ब्लड प्रेसर’ भनिन्छ । स्वस्थ मानिसमा रक्तचाप १२० र ८० मिमी मर्करी वा सोभन्दा कम हुनुपर्छ । रक्तचाप १४० र ९० भन्दा बढी भयो भने यसलाई उच्च रक्तचाप भनिन्छ । रक्तचाप बढी भएमा रक्तनलीहरु बढी तन्किन गई फुट्न सक्छन् । दिमागको नसा फुटे पक्षघात हुन्छ, आँखाको नसा फुटे अन्धोपन हुन्छ, मुटु वा मिर्गौलाका रक्तनलीमा असर परे हृदयघात वा मिर्गौला फेल हुन्छ ।
हार्ट फेल पनि मुटुको डरलाग्दो रोग हो । डा रेग्मीका अनुसार अधिकांश मानिस दम बढ्ने बित्तिकै फोक्सोमा खराबी आयो भन्ने सोच्छन् । तर, यो आंशिक रुपमा मात्र सत्य हो । दमको सम्बन्ध फोक्सोसँग मात्र नभई मुटुसँग पनि हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘यदि शारीरिक श्रम गर्दा दम बढ्छ र आराम गरेपछि कम भएर जान्छ भने यो मुटुरोग हुन सक्छ । मुटु सुन्निएको, मुटुका मांसपेशीहरु कमजोर भएको, मुटुको भल्भ बिग्रिएको अवस्थामा यस्तो प्रकृतिको दम उत्पन्न हुन्छ । यसलाई हार्ट फेल भएको भनिन्छ ।’ उनका अनुसार हार्ट अट्याक र हार्ट फेल फरक–फरक अवस्था हुन् । हार्ट अट्याक भएपछि मुटु कमजोर भई हार्ट फेल हुन्छ । मुटु कमजोर हुँदा मानिस सास नपुगेर निसासिन्छ । यसका साथै मुटु सुन्निने रोग तथा मुटुको घड्कनमा गडबडी आउने पनि 18मा आएको परीवर्तनका कारण मुटुमा देखिने समस्या हुन्।
१. भारतबाट औषधि ल्याउन सेटिङ मिलाउने भन्दै घुस लिने अनुसन्धानका सूचकलाई भ्रष्टाचार मुद्दा
२. गैर सरकारी चिकित्सकले पनि भने - स्वास्थ्य बाहिरको सचिव मान्य हुँदैन
३. रक्तक्यान्सरकी बिरामी विधी फर्किंदा परिवारमा खुसी
४. सर्वोच्चले माग्यो डा चौधरीको सरुवा र अधिकारीलार्इ स्वास्थ्य सचिव बनाउने सरकारको निर्णय
५. बिरामी हटाएर डाक्टरलाई आवास !
६. अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा नेपाली युवतीको ख्याति, के हो उनले डिजाइन गरेको महिनावारी पेन्टी?
७. सचिव डा पुष्पा चौधरीको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै
८. क्यान्सर औषधिजन्य फोहोरको व्यवस्थापन
९. संकटग्रस्त स्वास्थ्य– ४: स्वास्थ्य चौकीहरुमा औषधिका नाममा एन्टिबायोटिक मात्रै
१०. यी हितकारी चिकित्सक भए 'सिएनएन हिरो अफ द इयर'
१. यस्तो छ राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश (पूर्णपाठ)
२. कर्मचारी समायाेजनको आधार संघ र प्रदेश तथा स्थानीयमा छुट्टाछुट्टै, २१ दिनभित्र कार्यक्षेत्र पुग्नैपर्ने
३. स्वास्थ्यका कर्मचारी सरुवा रोकियो : कर्मचारी समायोजन नभएसम्म सरुवा नगर्ने सरकारको निर्णय
४. पाँच अस्पताललाई ‘प्रदेश रिफरल सेन्टर’ बनाउने स्वास्थ्यको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमति
५. क्वाकको कर्तुतः दाँतको उपचारमा लापरबाही गर्दा बिरामीलाई भयो क्यान्सर
६. जुम्ला जान १५० विशेषज्ञ डाक्टरले निवेदन हाले
७. स्वास्थ्य सचिवका रुपमा अधिकारीले पत्र बुझे, चिकित्सक संघ विरोधमा उत्रँदै
८. स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख हुन पाउनु पर्ने भन्दै एचए पुगे प्रशासन कार्यालय
९. छि! चिकित्साका विद्यार्थी बस्ने होस्टलको हालत: खानेपानीको ट्याँकीमा लेउ, लेदो र गड्यौला
१०. लाइसेन्सिङ परीक्षामा ५६ प्रतिशत डाक्टरी विद्यार्थी फेल